DOWNLOAD Boeing 787 Ezinaụlọ + Virtual Cockpit FSX & P3D - Freeware
Boeing 787 Family + Virtual kokpiiti FSX & P3D
Ozi si Erik BENDER (Rikoooo): Mgbe ọnwa ise mepụtara, enwere m obi ụtọ iweta a ọhụrụ mebere kokpiiti. Nke a bụ Boeing 787. Mpi a bụ nke kachasị elu (na ngalaba Freeware) ma dabere na akụ 3D nke MagKnight (lee ikikere ngalaba). Ma obughi soso, odi kwa ngwugwu zuru oke. N'ezie, agbakọtawo m ụdị 3D nke Boeing 787-8 / -9 / -10 GEnx site na TDS wee bụrụ aha "Ezinaụlọ".
N'okwu ole na ole, m na-eweta Boeing 787 "ụdị nsonye niile" dị njikere maka ọpụpụ ozugbo.
Ihe niile emegoro maka gị, VC bụ 100% jikọtara ya na TDS B787s. Enweghachiwo m ihe nlele XML niile iji mee ka ha kwekọọ, emeela m ihe ngosi niile nke ọdụ ụgbọelu mebere, mgbanwe ọ bụla, ihe ọ bụla, bọtịnụ ọ bụla, ọrụ ọ bụla. Anwalewo m ma gbanwee FDE nke ụgbọelu ọ bụla iji daba n'ụdị ụgbọ elu B787. Agbakwunyewo m liveries 54 dị elu nke m ahazi n'otu n'otu. Ma, ọtụtụ ihe ndị ọzọ!
Ọ bụrụ na ibudata a masịrị gị, biko tụlee ịkwado anyị site na ịdenye aha na Jumbo ma ọ bụ site na inye onyinye, daalụ nke ukwuu.
Kedu ihe gụnyere?
A ọhụrụ mebere kokpiiti maka Boeing 787 (otu nwa afọ FSX mbipute na otu nwa afọ Prepar3D v4 ụdị)
Atọ mpụga atọ (Boeing 787-8 / -9 / -10) jikọtara ya na kokpiiti
54 gbanwere liveries na 3 nanị Rikoooo liveries.
Ezigbo ụda maka B787 GEnx site na kairi Akai http://k-akai.blogspot.com/
Ihe ngosi omenala, GPS, GPWS ụda na mkpu, ụda mgba ọkụ, Pushback Panel, MLW calculator, GSU ​​Panel na Lighting Panel.
22 echiche ngosipụta (anya ngalaba-ọkwọ ụgbọ elu, echiche ịwụ elu-elu, ilele ihu igwe, echiche nku, echiche injinị, nlele gia, wdg).
FDE enwekwukwa maka nkwụsi ike na nguzozi (ọ dịghịzi imi imi)
AES, Intelliscene na faịlụ GSX
TDS 787 ihe osise ọha
Virtual kokpiiti ọrụ ntuziaka na B787 ntuziaka (faịlụ ndị dị na Documents nchekwa)
Rịba ama na enweghị panel 2D. Ma, ị nwere ike ofufe na-enweghị nsogbu ọ bụla na mebere kokpiiti mode n'ihi na m Integrated mmapụta windo maka isi avionics.
Kpachara anya, e nwere nsụgharị abụọ ịhọrọ n'oge nrụnye:
- Ma obu ụdị kachasị maka Fps ntụgharị na-enweghị sịnịma na-arụ ọrụ na MFD na PFD (enweghị ozi nchọgharị), yabụ a ga-egosipụta ihe niile na GPS.
- Ma ọ bụ a nkịtị version, ma nwere ike a bukwanu mmetụta Fps, dabere na ike nke na kọmputa gị.
Fps = meba ọnụego kwa nke abụọ
Ihe nlere ohuru maka GPS
Ihe nlere ohuru a na emezu ihe nile nke GPS 500 na otutu ndi ozo
atụmatụ kwukwara. Offọdụ n'ime atụmatụ ọhụrụ bụ:
Na-ege ntị ugboro ole ILS (ọ dịghịzị nlele map)
Nchekwa onwe na VORs na NDB
Selectable n'iji ya gee ntị VORs na NDBs
Ọdụ ụgbọelu kacha nso, VORs, NDB, na Intersections nwere ike ịchọ nọmba ọ bụla
Mkpebi elu ụgbọ elu dị elu na ndò ndò
Ihe ngosi ugbo elu ndi ozo (TCAS)
Atụmatụ ụgbọ elu Atụmatụ
Map ndị na-abaghị uru nwere ike ịhọrọ
Zuru ezu Flight Atụmatụ
Easy navigation n'etiti peeji
Abata ahọrọ ma rụọ ọrụ na clicks abụọ
Localiser na Glideslope Nav na enyere aka
Abịa nso Transition nhọrọ
Ọ bụ ezie na nlele a esiteghị na ezigbo nlele ọ bụla ọ pụtara na ọ ga-enwe ụdị ọdịdị na mmetụta ahụ
na mmekọrịta synoptic mmekọrịta na Boeing 787.
I nwetara ikike maka ọrụ a
Site na ikike n'aka Hiroshi Igami (TDS) onye okike nke ụdị mputa
Site na ikikere iji akụ sitere na Mariano Gonzalez (MagKnight) site na X-plane (Usoro 05.2 freeware)
Site na ikikere ideghari ihe niile 787 2d si Gavin Munro (b787v21.zip)
Site na ikikere iji nrụzigharị niile sitere na Carlos Eduardo Salas
Ndị na-akwado ọrụ ahụ
Ọrụ a agaraghị enwe ike ma e wezụga ndị nkwado a. Ọtụtụ ekele:
Gavin MUNRO maka ogwe 2D ya dị ebube yana maka inyere m aka ịme ihe nlele XML.
Hiroshi IGAMI maka inyere m aka na 3D kwalite kopiiti, textures na ọtụtụ nkọwa
Ken WEBBER maka nkọwa dị elu VC textures na Rikoooo liveries
Oniel OWU maka inyere m aka na 3DS Max na okike nke ụfọdụ eserese
Mariano GONZALEZ maka inye m ikike iji akụ ya FREEWARE sitere na B787 maka X-Plane.
Carlos Eduardo SALAS maka ikwe ka m jiri ndụ ya mee ihe na ngwugwu m, na-ekelekwa ndị ọzọ na -emepụta ihe maka ebe m na-etinyeghị.
Hiroaki Itoh maka inyere m aka imejọ njehie na ịnwale ụdị ụgbọ elu ụgbọ elu na sistemu mkpuchi ọdụ ụgbọelu.
Ndepụta nke ndụ dị ugbu a
=== Boeing 787-8 = =
Ihe ngosi Rikoooo 1
China Ndịda B-2725
Air India kpakpando Alliance
=== Boeing 787-9 = =
Ihe ngosi Rikoooo 2
=== Boeing 787-10 = =
Ihe ngosi Rikoooo 3
Emelitere na 14 / 03 / 2021: Ntughari Anụ 1.1
- Ejiri ederede SPD gosipụtara na PFD mgbe niile.
- GPS si na mbipute 1.6 gaa na mbipute 1.8:
Emegharịrị isi arụ ọrụ na Version 1.6 maka nsogbu ogo ogo 180 ugbu a ka Latitude na Longitude nke ụzọ ụzọ na-ezighi ezi gosipụtara ugbu a na ihuenyo kacha nso.
Agbakwunyere atụmatụ ọhụrụ iji gosipụta ebe dị anya ịga na ihuenyo MAP.
Ihe ohuru ohuru bu igosiputa oku di omimi na ihu VORs kacha nso na ihe nchoputa NDB kacha nso.
Agbanwewo ihe ịchọ mma ndị ọzọ iji mee ka ihu igwe dị mma ma wepụta usoro ochie na-enweghị isi. Mgbanwe ndị a apụtaghị nke ọma.
Emelitere na 18 / 12 / 2020: Boeing 787 Family + Virtual Cockpit ugbu a emelitere site na mbipute Beta 0.93 ka mbipute Anụ 1.0. E edozila ọtụtụ chinchi, iji 787 a efe bụ ezigbo obi ụtọ!
Lee mgbanwe m mere:
A na-achịkọta 787-8-9-10 na ederede PBR (Nlekọta Dabere na Ahụ) naanị maka Prepar3D v4 na v5, FSX anaghị akwado PBR. Mara: N’okpuru P3D v4 textures nwere ike ịdị greyish mgbe anya si n'akụkụ ụfọdụ, idozi nke a ị ga-gbanyụọ (Gbanyụọ) "Di omimi echiche" P3D ntọala. N'aka nke ozo, nsogbu adighi nke a P3D v5:
Mgbakwunye na nhazi nke ihe na-efu maka Autoland ILS CAT II / III akọwapụtara maka TDS 787 nke Dimitrios Moschos kere (lee faịlụ AUTOLAND_Readme.txt na Documents gị). 787 nwere ike ịda na nke ya na ILS!
Ofu usoro uzo adighi egosi na nnukwu MFD ihuenyo:
Ofu TAWS (Usoro Nghọta na Usoro ningdọ Aka ná Ntị) na-egosipụta maapụ ugbu a:
Ofu RANGE uru anaghị arụ ọrụ kwesịrị.
Dxed KA MARA ỌR ALAKA na-egbukepụ mgbe niile.
Doziri nsogbu mperi pere mpe na TDS787 gauges.
Idgbasawanye ihuenyo GPS.
GPS nlele dị ugbu a na mbipute 1.8, ILS enwere nsogbu dịgasị iche iche. (Ekele pụrụ iche nye Gavin Munro maka enyemaka ya)
Mgbanwe nke "lif_scalar" uru maka ụdị ọ bụla na faịlụ "Aircraft.cfg" iji mee ka ọdịda dabara na Autoland.
Etu esi arụ ọdịda ILS na Rikoooo GPS B787
downloads 54 211
kere 13 Sep 2020
emelitere 14 Mar 2021
VC akụ site Magknight na ntụgharị site Rikoooo. XML Gauges dabere na Gavin Munro. Teriordị mputa site n'aka Hiroshi Igami (TDS). 787 GEnx Soundset nke Kairi Akai. Rikoooo Liveries nke Ken WEBBER. Ndị ọzọ bi na Carlos Eduardo Salas